Sigcina ilungelo lokulahla nayiphi na umyalelo obekayo nathi. Sinokuthi, ngokuqonda kwethu kuphela, sinciphise okanye sikhoxise inani elithengiweyo ngomntu ngamnye, nganye kwikhaya okanye ngomyalelo. Ezi zithintelo zingabandakanya iilawulwe zibekwe okanye phantsi kwekhawunti enye yamakhasimende, enye ikhadi lekhredithi, kunye / okanye i-oda ezisebenzisa enye idilesi yokuthengisa kunye / okanye yokuthumela. Kwimeko apho senza utshintsho okanye sikhoxise umyalelo, sinokuzama ukukwazisa ngokuqhagamshelana ne-imeyile kunye / okanye idilesi yebhidi / inombolo yefowuni enikezwe ngexesha lo myalelo wenziwe. Silondoloze ilungelo lokunciphisa okanye ukuvalela i-oda, ekwahluleleni kwethu kuphela, kubonakala ngathi ifakwe ngabadayisi, abathengisi okanye abasabalalisi.
Uyavuma ukuba amazwana akho awayikuphulaphula nayiphi na ilungelo lalo naluphi na umntu wesithathu, kuquka ne-copyright, uphawu lokuthengisa, ubumfihlo, ubuntu okanye elinye ilungelo lomntu okanye ilungelo. Uyavuma kwakhona ukuba izimvo zakho aziyi kuqukumbela okanye zingekho mthethweni, zixhaphaze okanye zikhohlakele okanye ziqulethe nayiphi na intsholongwane yekhompyutheni okanye enye i-malware engayichaphazela nayiphi indlela ukusebenza kweNkonzo okanye nayiphi na i-website enxulumene nayo. Ungeke usebenzise idilesi ye-imeyile yamanga, uzenza ngathi ungomnye ngaphandle kwakho, okanye mhlawumbi ukhohlise okanye amaqela asithathu malunga nemvelaphi yazo naziphi na izimvo. Unembopheleleko yedwa naziphi na izimvo ozenzayo kunye nokuchaneka kwazo. Asiyi kuthatha uxanduva kwaye asiyi kuthatha uxanduva malunga naliphi na izimvo ezithunyelwe nguwe okanye nawuphi na umntu wesithathu.
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of XNUMX Powers Ferry Rd Marietta Georgia US XNUMX.